Ra'iisul Wasaare Kheyre oo gaaray degmada Guriceel
Tuesday July 02, 2019 - 17:54:04 in Wararka by
Wafdi uu hoggaaminayo Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa goordhow waxaa ay safar dhinaca dhulka ah ku tageen Degmada Guriceel oo ka tirsan Gobolka Galgaduud.
Wafdiga Ra’iisul Wasaaraha oo ka soo ambabaxayh Magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa ka mid ah xubno ka tirsan Golaha Wasiirada Soomaaliya iyo Xildhibaano ka tirsan labada Aqal iyo taliyeyaasha Ciidamada oo safarka ku wehliya Ra’iisul Wasaare Kheyre.
Ra’iisul Wasaaraha iyo Xubnaha la socda ayaa la filayaa inay kulamo kala duwan la qaataan Maamulka degmada iyo qeybaha kala duwan ee Bulshada, iyada Ra’iisul Wasaaraha uu boqolaal Shacab ah ugu khudbeyn doono Barxad ku taalla Degmada Guriceel.
Dadweyne kala duwan oo ka kala yimid Xaafadaha degmada guriceel ayaa haatan ku sugan goob fagaaro ah oo loogu talo galay in uu Bulshada kula hadlo Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya.
Saacadaha uu ku sugan yahay ra’iisul Wasaaraha ayaa waxaa uu sidoo kale kulamo looga hadlayo xaalada Galmudug iyo dhisida Maamul loo wada siman yahay uu kala hadli doonaa Odayaasha dhaqanka degmadaas.